“UPedro” Wabuyisela IMaisonette yee-1960
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguErica
Ibuyiselwe i-maisonette ye-1960 ebekwe kumbindi welokishi yasePort Elliot. Uhambo lwemizuzu emithathu ukuya ehorseshoe bay. Iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, ibha yewayini kunye negalari, iidiliya kunye nezinto zasekhaya, iivenkile zempahla kunye nebhakabhaka entle yasePort Elliot yonke kumgama omfutshane wokuhamba.
Le yindawo yabantu abadala kuphela
4 ABANTU MAXIMUM
AKUKHO MAQABA OKANYE IZIGANEKO
Akukho Wifi okanye iNetflix kodwa zininzi iiDVD, isithethi seBluetooth kunye
imidlalo yebhodi yokuzonwabisa kwakho.
Iindwendwe zethu ziya kuba nokufikelela kwindlu yonke kunye neyadi yangasemva- ubuninzi babantu abadala aba-4.
Babini, ncedani nibuze malunga nexabiso lethu elithotyiweyo lokufikelela kwigumbi elinye lokulala kuphela xa ubhukisha.
(Olu nikezelo alusebenzi kubhukisho lwePasika okanye lweKrisimesi)
Amaxabiso eeholide zikawonke-wonke ayahluka.
4 ubusuku ubuncinane iiholide Easter
Iiholide zesikolo ezi-3 ubuncinane kunye neeholide zeKrisimesi
Le yintlawulo yesibini kunye nommelwane we "CISCO".
"I-PEDRO" yagqitywa ngoDisemba ka-2020 kanye ngexesha leKrisimesi.
Iindwendwe zethu ziyakonwabela intuthuzelo yelinen entsha yebhedi ecocekileyo, igumbi lokuhlambela langoku, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ukufudumeza okubuyela umva kunye nokupholisa, iTV kunye neeDVD kunye nesithethi seBluetooth kuluhlu lwakho lokudlala lomculo. Ikwaxhotyiswe ngefenitshala engasemva ye-BBQ kunye neshawari yangaphandle.
Ndiya kudibana kwaye ndibulise ngomhla wokufika kwakho.
Sihlala kufutshane kwaye siya kuba sePort Elliot ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$361